स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक यी खराब बानी | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक यी खराब बानी
प्रकाशित मिति २९ बैशाख २०७६, आईतवार ०९:३० लेखक नेपाली जनता
भनिन्छ नि खराब बानी त्याग्नु पर्दछ । तर यहाँ केही यस्ता खराब बानीहरू छन् जुन स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । जो व्यक्तिहरू आफ्ना खराब बानी त्याग्न नसकेर बसिरहेको छ उसका लागि यो राम्रो खुराक हुन सक्दछ ।
१. गाली गर्नु : यदि तपाई एकदमै रिसले चुर भएर कसैलाई गाली गर्नुहुन्छ भने पक्कैपनि त्यहाँ तपाईको कुनै शिष्टाचार हुँदैन तर पनि तपाई पीडा तथा दुख कम गर्न यो एकदमै अमूल्य चिज हो । न्यूरोरीपोर्ट जर्नलमा छापिएको एक शोधका अनुसार गाली गर्नाले शरीरमा ‘फाइट अर फ्लाइट रेस्पोन्स’ बढाउने काम गर्दछ ।
२.बियर पिउनु : सायद बियर पिएर मानिसले आफुलाई खराब व्यक्ति भन्न सक्दछ तथा आफूलाई जड्याँहा नै मान्न सक्दछ तर यो खराब आदत पनि शरीरका लागि फाइदाजनकको सूचीमा परेको छ । यसले हृदयका रोगहरूको खतरालाई कम गर्दछ । यूरोपियन जर्नल अफ एपिमेडियोलोजीमा प्रकाशित शोधले थोरै मात्रामा बियर पिउनु हृदय रोगको खतरालाई ३१ प्रतिशतले घटाउने जानकारी दिएको छ ।
३.नकारात्मक सोच : नकारात्मक सोच एक सकारात्मक पक्ष्ँ पनि हो । पिएलओएस जर्नलमा छापिएको शोध अनुसार नकारात्मक भावनालाई जसले गम्भीररुपमा लिइरहको हुन्छ ऊ भावनात्मकरुपमा अधिक मजबुत र बलियो भएका हुने र आफ्नो हेरचाह राम्रोसँग गर्न सक्ने बताएको छ ।
४.कुराकानी गर्नु : यदि तपाई अरु कोहीसँग कुराकानी गर्दै कार्य गर्नुहुन्छ भने तपाई सामाजिक व्यक्तित्व हुन सक्नुहुन्छ । यो कुरा सोसल साइकोलजिकल एन्ड पर्सनालिटी साइन्स जर्नलले एक शोधमा कुराकानी गर्ने व्यक्तिले व्यक्तित्वलाई हल्का गराउने र काममा प्रभावित गर्ने कुरा खुलासा गरेको हो ।
५.चुइगम चपाउनु : हामी चुइगम चपाउनुलाई अशिष्ट र नराम्रो मान्ने गर्दछौं । तर एपेटाइट जर्नलमा प्रकाशित एक शोधले भने चुइगम चपाउने व्यक्तिको दिमाग तेज हुने बताएको हो । चुइगम चपाउनुलाई बौद्धिक अभ्यास पनि मान्ने गरिन्छ ।
किशोरीको पहिलो सहबास
१. दश किशोरीमध्ये चार जनाले पहिलोपटक १३ देखि १४ वर्षको उमेरमा परिबन्ध, बाध्यता वा चासोका रुपमा सहबास गर्छन् ।
सामाजिक अभियन्ताको नाममा अनर्गल प्रचार
काठमाडौँ । सामाजिक अभियन्ताको नाममा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अपव्याख्या गर्दै न्युरोडमा निर्माणाधिन नियोक्यासिकल भवन महर्जन कम्प्लेक्सको विरुद्धमा विभिन्न निकायमा…
शनिबारसम्म पानी पर्छ : मौसमविद्
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका पश्चिम भेगमा वर्षा भइरहेको छ । दार्चुला, हुम्ला, डोल्पालगायतका स्थानहरुमा भने हिमपात भएको छ…
प्रहरी र स्थानीयबीच झडप, ३ प्रहरीसहित ५ घाइते
काठमाडौं । रौतहटमा बिहिबार साँझ प्रहरी र स्थानीयबीच झडप भएको छ । झडपमा परि ३ जना प्रहरी र २…
डडेल्धुरा । आलिताल गाउँपालिका– ८ गोदाममा भएको आगलागीमा परी एक बालिकाको मृत्युको छ भने एक गम्भीर घाइते भएकी छिन…
भावी आइजीपी अध्यक्ष रहेको स्कुलमा भद्रगोल
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले विभिन्न ठाउँमा विद्यालय संचालन गरिरहेको छ । प्रहरीमा कार्यरत तल्लो दर्जासम्मकाले आफ्ना सन्ततिलाई सहुलियत दरमा…
यस्ता कर्मचारीले नपाउने भए पेन्सन 53 views